Yan Aung: May 2009
ဩော်... မ၀ါ... မ၀ါ.... အမြည်း (အဲလေ..) အမီးဆိုတဲ့ မ၀ါ...
ဟိုးတလောတုန်းက ဓာတ်ပုံတောင်းတယ်. ပို့စ်တင်ပေးပါတဲ့. တက်ဂ်တဲ့... ဓာတ်ပုံတော့ ပြရဲဘူးဗျာ. တစ်ခြားဟာ တက်ဂ်ပါဆိုတော့... နောက်တစ်တက်ဂ်လာပြန်တယ်. သီချင်းဆိုပါတဲ့...
တိန်... ကျုပ်ကစာပဲရေးတတ်တာ. သီချင်းဆိုရင် အမြီးအမောက်တည့်တာမဟုတ်လို့ ပြန်ပြီး ရီပလိုင်းလုပ်ရတယ်.
ဒီလိုနဲ့ပဲ ပြီးသွားခဲ့ပြီလို့ထင်တာ ခုကျတော့ နောက်တစ်တက်ဂ်လာပြန်တယ်... 'နိုင်ငံဂျားပြန်' တဲ့ဗျာ... ဘယ်လိုရေးရမလဲ မသိဘူး. ကျွန်တော်က တစ်ခါမှ မပြန်ဖူးသေးဘူးကိုးဗျ. အဲလိုပြောလို့ ဟာ...ဒီကောင်စိတ်ပြတ်လှချည်လားလို့ မထင်နဲ့နော်. ပြန်စရာပိုက်ပိုက်ကို မရှိလို့ မပြန်ဖြစ်တာပါ အရပ်ကတို့ရယ်.... အီးးးးးးး ဟီးးးးး ဟီးးးးးးးးးးးး
အင်း... နိုင်ငံခြားထွက်တယ်ဆိုတာ လွယ်ကူတဲ့အလုပ်မဟုတ်မှန်းတော့ အထွေအထူးပြောပြနေစရာ မလိုပါဘူးလေ. တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အဖြစ်သနစ်ချင်းက ထပ်တူထပ်မျှသာ မတူရင်နေမယ်. လှုပ်ရှားရုန်းကန်ပြင်ဆင်ခဲ့ရတာ၊ ရင်မောစိတ်ပူခဲ့ရတာတွေကတော့ ပိန်မသာလိန်မသာတွေချည်းပါပဲ. ကျောင်းသားပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ရှိုးဂျော့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နောက်ဆုံး Visit သမားတောင် ဗီဇာမရမှာ စိတ်ပူရ၊ ဟိုရောက်ရင်သွားရလာရမယ့် ကိစ္စ၀ိစ္စတွေအတွက် စိတ်ပူရ၊ လာကြိုမယ့်သူကို သေချာအောင် ပြောဆိုရနဲ့ပေါ့.
ကဲ. ကျွန်တော့်ရဲ့ ရင်မောခန်းကြီး စတင်ပါပြီ...
ကျွန်တော် ဒီကိုလာဖို့ လေယာဉ်လက်မှတ်ဝယ်တာကို သွားသတိရမိတယ်. ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ပဲ ကျွန်တော် အသိတစ်ယောက်ဆီက ပိုက်ဆံချေးဖို့ အခွင့်သာခဲ့တယ်. ၃ ကျပ်တိုးနဲ့ပေါ့ဗျာ. ဟုတ်. ကျွန်တော် semester တစ်ခုစာအတွက် ပိုက်ဆံချေးခဲ့ရပါတယ်. တစ်ခုစာလို့ပြောတာနော်. တစ်နှစ်မှာ semester နှစ်ခု ရှိပါတယ်. လူရွှင်တော်တွေ ပြောသလိုပြောရရင်တော့...
ကံကောင်းချင်တော့ စကောလားရှစ်ရတယ်. ကံဆိုးချင်တော့ အပြည့်မရဘူး. ကံကောင်းချင်တော့ ကျောင်းစရိတ်အပြည့်ရတယ်. ကံဆိုးချင်တော့ နေစရိတ်မရဘူး. ကံကောင်းချင်တော့ ပိုက်ဆံချေးမယ့်သူပေါ်လာတယ်. ကံဆိုးချင်တော့ တစ်နှစ်စာ မချေးနိုင်ခဲ့ဘူး. ကံကောင်းချင်တော့ လက်မှတ်ဝယ်တာနောက်ကျပေမယ့် ရလိုက်တယ်. ကံဆိုးချင်တော့ တိုက်ရိုက်ရောက်တဲ့လက်မှတ်မဟုတ်ဘူး. သုံးဆင့်ကူးရမယ်. ဘလာဘလာဘလာပေါ့ဗျာ...
ရန်ကုန်လေဆိပ်ကအထွက် မိသားစုနဲ့ ခွဲခွာခဲ့ရလို့ အင်မတန့် အင်မတန် ၀မ်းနည်းရပါတယ်. ပူဆွေးရပါတယ်. မားသားကြီးကို ပွေ့ဖက်ပြီး အခိုင်အမာပြောခဲ့တယ်. နောက်နှစ်နှစ်နေရင် ကျွန်တော် ခဏပြန်လာခဲ့မယ်လို့... ခုများတော့ ၂၀၀၉-၂၀၀၄ = ၅ နှစ်... ၅ နှစ် အမေရယ်.... ၅ နှစ် သိလား....ခုထိမပြန်နိုင်သေးဘူးဗျ.. အိ..အိ..အိ...
(ဆိုဖာကြီးပေါ်ထိုင်ရင်း ခုန်ဆွခုန်ဆွနဲ့ ငိုနေလို့ အိ..အိ..အိ. နဲ့အသံထွက်နေသည်ဟု မှတ်ရန်..)
ပြန်ပါတော့လားဆိုပြီး ဇွတ်မှိတ်ပြန်ရင်တော့လည်း ရသားပေါ့. ဒါပေသိ အလုပ်အကိုင်က ရှားပါးနေချိန်၊ ကျောင်းကအကြွေးတွေကို ဖဲ့ဆပ်နေချိန်၊ အင်း.... အဲဒါတွေကိုထည့်တွက်တာလည်းပါတယ်.
ဒါပေမယ့် ပြတ်ပြတ်သားသားပြောရရင်တော့ ကျွန်တော့်ရည်မှန်းချက်မပြည့်သေးလို့ မပြန်သေးတာပါ... ဂလွပ်... (ဖုန်းချလိုက်တာလေ) ဟတ်ဟတ်
လေဆိပ်ကထွက်တော့ ချိုင်းနားအဲယားလိုင်းနဲ့ပေါ့. ထိုင်ဝမ်မှာ Connection လုပ်ရတယ်. တစ်မျိုးမထင်နဲ့နော်. ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောမယ်. ထိုင်ပေကို ၀င်ပြီးဆိုကတည်းက အသွင်အပြင်တွေက လုံးဝပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်... ရန်ကုန်လေဆိပ်နဲ့ ထိုင်ဝမ်လေဆိပ်ကိုပဲ ယှဉ်ကြည့်မိတယ်. ညဖက်ခြောက်ကပ်မည်းမှောင်နေတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ပျက်ညကြီးနဲ့ မီးတွေလင်းထိန်ပြီး လှပသာယာနေတဲ့ ထိုင်ပေမြို့ကြီးကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မိတယ်. အရမ်းကို ရှေ့ာခ်ဖြစ်သွားမိတယ်. တော်တော်လည်း စိတ်တိုဒေါသထွက်သွားမိတယ်. မျက်စိထဲမှာ ရေအားလျှပ်စစ်ဆိုတာကြီးတွေ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဆိုတာကြီးတွေ၊ လျာထားချက်ထက် ပိုလွန်ပြီးစီးဆိုတာကြီးတွေ၊ Mega Watt ဘယ်လောက်ဘယ်ရွေ့ထွက်သည် ဆိုတာကြီးတွေ....
ဖူးးးးးးးးးး... သက်ပြင်းတစ်ချက်ချတိုင်းသာ အသက်တစ်ရက်တိုရရင် ကျွန်တော် မာလကီးယားသွားတာ ကြာပေါ့လို့တောင် တွေးမိလိုက်တယ်. ပြီးတော့ လေဆိပ်မှာ ညဖက်တစ်ညလုံး ထိုင်စောင့်နေရမယ့် ကျွန်တော့်အဖြစ်ကို ပြန်တွေးမိပြီး အားလည်းငယ်သွားမိတယ်.
လေဆိပ်ထဲကိုဝင်တော့ နောက်ထပ်ဆက်စီးရမယ့် ခရီးသည်တွေ ဒီဖက်ကိုလာပါဆိုပြီး ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်က အော်ပြောတာနဲ့ သူပြတဲ့နောက်လိုက်သွားရတယ်. ဟိုရောက်တော့ ပတ်စပို့တွေပြ၊ စာရွက်စာတမ်းတွေပြပြီး နောက်ထပ်စီးရမယ့် လေယာဉ်အတွက် Boarding Pass ယူရတယ်. တိုင်းတစ်ပါးမှာ ဘယ်သူမှ အကူအညီမရှိဘဲနဲ့ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် အင်္ဂလိပ်လို ဆက်ဆံပြောဆိုရတာ ကျွန်တော်အားလည်းငယ်တယ်. ၀မ်းလည်းသာမိတယ်. အဲဒါနဲ့ပဲ အထဲကို ဆက်ဝင်သွားပြီး Waiting Area မှာ ထိုင်စောင့်နေလိုက်တယ်.
ဘေးဖက်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ကဒ်ဖုန်းတွေချိတ်ထားတာတွေ့ရတယ်... ဟုတ်ပါပြီ. ကျွန်တော် ဘယ်သူ့ကိုဆက်ရမတုန်း. ရန်ကုန်ကို ပြန်ဆက်ပြီး အခြေအနေကောင်းတယ်လို့ ပြောရမလား. ဒါမှမဟုတ် စင်ကာပူက သူငယ်ချင်းတွေကို လှမ်းဆက်ပြီး ငါတော့ ထိုင်ဝမ်မှာ လေယာဉ်စောင့်နေတယ်ဘာညာ ပြောရမလား... အဲဒါနဲ့ပဲ ခေါင်းကို ယမ်းထုတ်လိုက်ပြီး ကျောပိုးအိတ်ကိုဖွင့်၊ အထဲက အာလူးကြော်နဲ့ ရေဘူးကိုထုတ်ပြီး တဂျွမ်းဂျွမ်းဝါးစားလို့ အချိန်ဖြုန်းနေလိုက်တယ်. အချိန်က ည ၇ နာရီပါ. ဒီတစ်ခါ ကျွန်တော်စီးရမယ့် လေယာဉ်က nonstop flight ပေါ့. လေယာဉ်လက်မှတ်ထဲက လေယာဉ်နံပါတ်နဲ့ ဘုတ်ပေါ်မှာ ချိတ်ထားတဲ့ နံပါတ် တိုက်စစ်ကြည့်ရတာလည်း အခါခါ၊ ကောင်တာမှာ ထိုင်နေတဲ့ ၀န်ထမ်းလှုပ်ရှားတာ၊ ကြေငြာတာတွေကိုလည်း တစ်ခုမှ မလွတ်စေဘဲ လိုက်စောင့်ကြည့်နားထောင်နေရတာလည်း အခါခါပါပဲ.
ကြာတော့လည်း ပျင်းလာတယ်. ဟုတ်တယ်လေ. စီးရမယ့်လေယာဉ်က မနက်ခင်းအစော (၄ နာရီလားမသိဘူး. ကောင်းကောင်းမမှတ်မိတော့ဘူး. ကြာပြီလေ.း) ) ကျွန်တော်ရောက်နေတာက ည ၇ နာရီ... ရန်ကုန်မှာလက်မှတ်တွေ ကုန်သွားလို့ ရတဲ့လက်မှတ်နဲ့ လိုက်လာခဲ့ရတာလေ. ဒီဖက်က အေးဂျင့်က ထိုင်ဝမ်-ဆန်ဖရန်စစ္စကို လက်မှတ်သက်သက်ဝယ်ပေးထားတယ်. ဒါကြောင့် အချိန်တွေက အရမ်းဟနေတာ. အဲဒီ့တုန်းက Sunfar နဲ့ ၀ယ်လာခဲ့တာထင်တယ်. ဟုတ်တယ်. အဲဒီ့က မချောစု ကူညီပေးလို့ လက်မှတ်ရလိုက်တာတောင် မှတ်မိသေးတယ်. ကျေးဇူးအရမ်းတင်လို့ ဟိုရောက်ရင် တစ်ခုခုပို့ပေးချင်တယ်. ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ဖြစ်၊ လိပ်စာဖြစ်ဖြစ် ပေးပါဆိုတော့ မချောစုခမြာ ခေါင်းကိုတွင်တွင် ခါရမ်းငြင်းဆန်တာကို မှတ်မိပါသေးရဲ့.... အဲဒီ့လောက်ထိတောင် ပေါက်ရောက်တာ. ဟင်းဟင်းဟင်း...
မနက်လေယာဉ်စီးချိန်နီးလာတော့ လူတွေ တဖြည်းဖြည်းပိုများလာတယ်. အားလည်းပိုတက်လာမိတယ်. မဟုတ်ရင် တစ်ယောက်တည်း ယောင်ချာချာနဲ့လေ. ဘေးဖက်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ တစ်ချို့ ကျောင်းသွားတက်မယ့် ပုံစံလေးတွေ တွေ့ရတယ်. တစ်ချို့ အိမ်ပြန်တဲ့ပုံစံ. မိသားစုလိုက်ထိုင်နေတာတွေ့ရတယ်. တစ်ချို့ကတော့ အလုပ်ကိစ္စပုံစံ ကြောင်လျှာသီးတွေ တန်းလန်းတန်းလန်းနဲ့ပေါ့. ဘယ်သူ့ဘာပြောရမှန်းမသိတော့တာနဲ့ ဦးဇောတိကစာအုပ်တစ်အုပ် ထုတ်ပြီး ဖတ်နေလိုက်တယ်.
ပြီးတော့ လေယာဉ်ပေါ်တက်ရတယ်. အထွေအထူးတော့ မရှိတော့ပါဘူး. နည်းနည်းလည်း ပိုရဲလာသလို ခံစားရတယ်လေ. မရဲလို့လည်း မရတော့ဘူး. ကိုယ့်ကိုယ်ကို fighter စိတ် အပြည့်အ၀သွင်းထားလိုက်တယ်. မသိရင်မေးမယ်. နားမလည်ရင် စုံစမ်းမယ်. ပါးစပ်ပါရွာရောက်ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားပေးရင်း Boeing 717 ကြီးပေါ် တက်လာခဲ့လိုက်တယ်.
အားပါးပါးးး.... ကြီးလိုက်တဲ့ လေယာဉ်ပျံကြီး... အရင်တုန်းက စာစောင်တွေထဲမှာပဲ ဖတ်ဖူးခဲ့တဲ့ လေယာဉ်ပျံကြီးပေါ်ကို ခြေချခွင့်ရတာ ငါတော့ သိပ်ကိုကံကောင်းတာပဲလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်ထဲမှာ အကြိမ်ကြိမ်ပြောမိတယ်. တောသားမြို့တက်ဆိုတာ ကျွန်တော့်လိုလူမျိုးကို ပြောခဲ့တာနဲ့ တူပါရဲ့ဗျာ. ဟတ်ဟတ်...
ဒါပေသိ ကျွန်တော်က တောသားအစစ်မဟုတ်ခဲ့လေတော့ ဟိတ်ဟန်လေးကတော့ ရှိသားပေါ့...
လေယာဉ်ပေါ်ရောက်လို့ ဟိုဟာကိုင်ကြည့် ဒီဟာကိုင်ကြည့် ကျွန်တော်မလုပ်ပါဘူး. ကိုင်ချင်ရင်တောင် မသိမသာလေး ကိုင်တာပေါ့. (ဩော်... ထိုင်ခုံတွေ.. လက်တန်းတွေကို ကိုင်ကြည့်တာကို ပြောတာပါ. ဟတ်ဟတ်.) အမြဲတမ်း သွားလာနေတဲ့ ခရီးသည်ပုံစံမျိုးချိုးပြီး ကိုယ့်ထိုင်ခုံနံပါတ် ကိုယ့်ဖာသာရှာ၊ အပေါ်က အံကိုဆွဲဖွင့် အိတ်ကို ထိုးထည့်၊ ထိုင်ခုံကို သေချာပြင်၊ ဖိနပ်ကြိုးတွေဘာတွေလျှော့... ပြီးတော့မှ အသာထိုင်ချလိုက်တယ်. ဘေးဘီကိုအကဲခတ်ကြည့်တော့ ထိုင်ခုံကလွတ်နေတယ်.
အင်း... ခရီးကလည်းအဝေးကြီးပျံရမှာဆိုတော့ ကိုယ့်ဘေးနားမှာ ကောင်မလေးချောချောလေး တစ်ယောက်လောက် လာထိုင်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့ ဂေါ်တွေးတွေးမိတာကိုလည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ၀န်ခံမိပါရဲ့ဗျာ... ဟတ်ဟတ်ဟတ်.. ရှက်လိုက်တာ. ဒါပေမယ့် ဆက်ပြောမှာပဲ.
ခဏနေတော့ လူက လေယာဉ်ပျံကြီးရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကို နည်းနည်းနားလည်သလို ရှိလာတယ်. ဆိုလိုတာက ဘယ်နေရာမှာ ဘာရှိတယ်. ဘာညာပေါ့. အိမ်သာကို သုံးနေရာခွဲထားတယ်. အလယ်တစ်နေရာ၊ နောက်တစ်နေရာ၊ ဟိုးရှေ့ဆုံးမှာ တစ်နေရာ စသဖြင့်ပေါ့. ပြီးတော့ လေယာဉ်ကြီးမှာ ထိုင်ခုံနေရာ သုံးနေရာခွဲထားပြန်တယ်. ဘယ်ဖက်၊ ညာဖက်နဲ့ အလယ်ပေါ့. ဘယ်ဖက်မှာ ၃ ခုံ၊ ညာဖက်မှာ ၃ ခုံ နဲ့ အလယ်မှာ ၅ ခုံလားမသိဘူးဗျ. လျှောက်လမ်းကြီးကလည်း အကျယ်ကြီးပဲ...
ကျွန်တော်တော့ ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး. အသစ်အဆန်းတွေနဲ့ချည်းတွေ့နေရတော့ ပျော်သလိုလို၊ ရင်ခုန်နေသလိုလိုတော့ ရှိသား...
ကံကောင်းချင်တော့ ကျွန်တော်က အစွန်မှာ နေရာရတယ်. ပြတင်းပေါက်ရှိတဲ့ဖက်ပေါ့.
ခဏနေတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ညာဉ်အတိုင်း အိမ်သာဖက်ကို ထွက်လာခဲ့တယ်. ကျွန်တော်က နေရာအသစ်တစ်ခုကို ရောက်ရင် အိမ်သာသွားတတ်တယ်ဗျ. (သတိထား. ဟတ်ဟတ်)... အိမ်သာသွားရင် လမ်းလျှောက်ရတာပေါ့ဗျာ. (အင်းလေ. ဘယ်သူက ထမ်းပို့မတုန်း)... ရှုပ်ကုန်ပြီ. လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ ဘေးဘီကို အကဲခတ်. အိမ်သာကနေပြန်ထွက်လာတော့ ရှေ့နောက် အကဲခတ်ရင်းနဲ့ ကိုယ့်နေရာကို နားလည်အောင် လေ့လာယူတဲ့သဘောပါ.
အိမ်သာကလည်း ကောင်းပါတယ်. အိမ်သာထဲရောက်တော့ ကျွန်တော် ဘာလုပ်တယ်ထင်လဲ... ဟိုးထားဆရာ. အတွေးမမှားနဲ့.
လပြည့်ဝန်းပလာဇာက ၀ယ်လာခဲ့တဲ့ ဝေါ့ကင်းရှုးလေးကို ချွတ်. ခြေအိတ်ကိုပါ ဆက်ချွတ်ပြီး ခြေအိတ်ထဲမှာ ပလတ်စတစ်နဲ့ ထုပ်ထားခဲ့တဲ့ ယူအက်စ်ဒေါ်လာပိုက်ဆံထုပ်လေးကို အခြေအနေကောင်းလားဆိုပြီး စစ်ကြည့်ရတာပါ. တော်ကြာ ချွေးတွေနဲ့ရွှဲပြီး ပျက်စီးကုန်ရင် ကျွန်တော့်ဘ၀ပျက်ပြီလေ. ဒါလေးနဲ့ရင်းပြီး ထွက်လာခဲ့ရတာကိုး. သိပ်တော့မများလှပါဘူး. ဒေါ်လာ ၄၅၀၀ ထဲပါ. မြန်မာငွေနဲ့ဆို သိန်း ၅၀ ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပေါ့. ဟုတ်တယ်ဗျာ. ကျွန်တော့်မှာ အဲလောက်တောင် မချမ်းသာခဲ့ဘူး. အကြွေးနဲ့ နိုင်ငံဂျားကို လာခဲ့ရတာပါ... ငိုချင်လာပြန်ပြီ...
ပိုက်ဆံကို ဘာလို့ဖိနပ်ထဲထည့်လဲ ဟုတ်လား... ခင်ဗျားတို့ သိမှာပါ. ရန်ကုန်ကအထွက် ပိုက်ဆံသယ်ရတာ မလွယ်လှဘူးလေ. စစ်လားဆေးလားလုပ်ရင် ဒုက္ခ. ပြီးတော့ ဒီဖက်ကို ကြိုလွှဲထားဖို့လည်း အသိအကျွမ်းကမရှိ. ဒီတော့လည်း ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ ဖွက်ပြီး သယ်လာခဲ့ရတာပေါ့. အောက်ခံဘောင်းဘီထဲ ထည့်ဖွက်ဖို့ တစ်ချို့က ပြောပါသေးတယ်. တစ်ချို့ကတော့ အထဲမှာ အိတ်အပိုလေးချုပ်ပြီး ထည့်သွားပေါ့တဲ့. ကျွန်တော်ကတော့ စိတ်အချရဆုံးဖြစ်တဲ့ ခြေအိတ်ထဲပဲထည့်တယ်. ဖိနပ်ထဲတောင် မထည့်ရဲဘူး. တော်ကြာ လေဆိပ်မှာ ဖိနပ်ချွတ်စစ်ခိုင်းရင် တွေ့သွားမှာစိုးလို့..
ထားပါတော့ဗျာ. အိမ်သာထဲက ပြန်ထွက်လာတော့ ကျွန်တော့်ထိုင်ခုံဘေးမှာ ခရီးသည်တစ်ယောက် ၀င်ထိုင်နေတာကို ရင်ခုန်စွာ လှမ်းတွေ့လိုက်ရပါတယ်. ဘယ်လိုလုပ်သိလည်းဆိုတော့ အဲဒီ့နားမှာ ပစ္စည်းတွေကို လေယာဉ်မယ်တစ်ယောက်က ကူတင်ပေးနေတာ တွေ့လိုက်ရလို့ပါ. အဲဒါနဲ့ ဆံပင်ကို သေချာသပ်၊ အ၀တ်အစားကို သေချာပြန့်အောင် ဖြန့်ပြီး ကိုယ့်နေရာကို ပြန်ကြွမြန်းလာခဲ့ပါတော့တယ်.
အနားလည်းရောက်ရော ရင်ခုန်စွာနဲ့ ကိုးရီးယားမင်းသားကြည့်လေး ကြည့်လိုက်တာပေါ့..
ကျွန်တော့်ကို မှုန်ဝါးဝါးနဲ့ တစ်ချက် လှမ်းကြည့်ပြီး စူပုပ်ပုပ်နဲ့ ဟိုဖက်ကို ပြန်လှည့်သွားတယ်. ပြီးတော့ လက်ထဲက တုတ်ကောက်ကို လေယာဉ်ကြမ်းပြင်ပေါ် တဒေါက်ဒေါက် ခေါက်ပြီး ပါးစပ်ကလည်း ပွစိပွစိပြောနေတယ်. ကျွန်တော်လည်း အိတ်စ်ကွတ်မီလို့ ပြောပြီး ကိုယ့်ထိုင်ခုံရှိတဲ့ အတွင်းဖက်ကို လှမ်းဝင်လိုက်တယ်.
ထိုင်ခုံကို လှည့်ပတ်ကြည့်ပြီး အနောက်ကို မှီချလို့ရတဲ့ ခလုတ်လေးကို ဆွဲလိုက်၊ ပြန်တင်လိုက်နဲ့ ကျွန်တော် ထိုင်ခုံသုတေသနလုပ်နေတာကို အဘိုးကြီးက လိုက်ကြည့်နေပါတယ်. ခဏနေတော့ ကျွန်တော်လည်း ထိုင်ခုံအကြောင်း သေချာနားလည်သွားပြီး လေယာဉ်မယ်ဆီက နားကြပ်တစ်စုံလှမ်းတောင်းလိုက်ပါတယ်. ပြီးတော့ ထိုင်ခုံဘေးက နားကြပ်ပေါက်လေးမှာ ထိုးထည့်ရင်း ရေဒီယိုသီချင်းလေးတွေ နားထောင်နေလိုက်ပါတယ်. တော်ပြီ... စိတ်လျှော့လိုက်ပြီ... ဒီခရီးစဉ်ကြီးတစ်ခုလုံး အ၀အိပ်သွားတော့မယ်.... ဖူးးးးးးး လို့တော့ အသံမထွက်မိပါဘူး. စိတ်ထဲကပဲ သက်ပြင်းချလိုက်တာပါ.
ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျွန်တော် တစ်လမ်းလုံး အိပ်လိုက်၊ ရေသောက်လိုက်၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်လိုက်၊ စားလိုက်၊ သောက်လိုက်၊ ပြန်အိပ်လိုက်နဲ့ ဆန်ဖရန်စစ္စကို မြို့တော်ကြီးကို ဆိုက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်. လေယာဉ်မူးကြီး (အဲလေ. လေယာဉ်မှူးကြီးရဲ့) ကြေငြာချက်ထွက်လာတော့ ကျွန်တော်လည်း ပြတင်းပေါက်လေးကို ကမန်းကတန်းဆွဲဖွင့်လိုက်တာပေါ့.
ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာပဲ တွေ့ဖူးခဲ့တဲ့ ဂိုးလ်ဒင်းဂိတ် တံတားကြီးးးးး
လှလိုက်တာ.. လှလိုက်တာလို့ အကြိမ်ကြိမ် ရေရွတ်နေမိခဲ့တယ်... ပြီးတော့ တစ်နေ့ ငါဒီကို လာပြီး ဓာတ်ပုံတွေ လာရိုက်ဦးမယ်လို့လည်း အားခဲထားလိုက်တယ်.
တအောင့်လောက်နေတော့ လေဆိပ်ကို ဆင်းပါတယ်. လေယာဉ်ကွင်းကနေ အထဲကို ၀င်သွားတော့ နေရာက သုံးနေရာ ခွဲထားတယ်ဗျ. Citizens တွေအတွက်ရယ်၊ Permanent Residents တွေအတွက်ရယ်၊ Non-residents တွေ အတွက်ရယ်လားမသိဘူး. သုံးနေရာ ခွဲထားတာကိုတော့ မှတ်မိတယ်.
ကိုယ်က ကျောင်းသားဆိုတော့ Non-residents ဖက်ကို ထွက်လာပြီး တန်းစီနေလိုက်တယ်. Immigration officers တွေနဲ့ တွေ့ရင်ပေးဖို့ဆိုပြီး သံရုံးကပေးလိုက်တဲ့ 'Do Not Open' ဆိုတဲ့ စာအိတ်လေးကို ထုတ်ပြီး၊ ကိုယ့်ရဲ့ တစ်ခြား စာရွက်စာတမ်းတွေကို အသင့်ပြင်ဆင်ပြီး စောင့်နေလိုက်တယ်.
ခဏနေတော့ ကျွန်တော့်အလှည့်ရောက်တယ်. Officer ကြီးမေးတာကို ဖြေနေချိန်မှာပဲ သူက ကျွန်တော့်ကို ကင်မရာနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်ယူသွားခဲ့တယ်. လက်ကကိုင်ပြီးရိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး. ကျွန်တော့်ဘေးမှာ ချိတ်ထားတဲ့ ကင်မရာလေးကနေတဆင့် ကျွန်တော့်ကို လှမ်းရိုက်သွားတာပါ. ပြီးတော့ စာအိတ်ကိုဖွင့်. စာရွက်ကိုဖတ်ကြည့်ပြီး 'ဒုန်း' ဆို ထုပေးလိုက်ပါတယ်. အဲဒီ့ကျမှပဲ ကျွန်တော်လည်း စိတ်အေးရပါတော့တယ်. ဘာလို့လည်းဆိုတော့ တစ်ချို့ လေဆိပ်က Immigration မှာပဲ ၀င်ခွင့်မပေးလို့ ပြန်လှည့်ပြန်ရတာမျိုးတွေကို ကြားဖူးနေတာကိုး...
'Good luck with your studies' ဆိုတဲ့ အသံလေးကို နောက်မှာ ထားခဲ့ပြီး ကျွန်တော့်ရဲ့ ပစ္စည်းတွေ ထွက်ကျလာနေတဲ့ Conveyor Belt ကြီးဖက်ကို ထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်.
ကျွန်တော့်မှာ ပစ္စည်းက သုံးအိတ်. ဒါတောင် Hand carry နဲ့ ကျောပိုးအိတ်က လက်ထဲမှာ ကိုင်ထားသေးတာ. မားသားကြီးတို့ကလည်း ဘယ်လောက်တောင် ကျွန်တော့်ကိုချစ်လည်းဆိုရင် ဟိုရောက်ရင်သုံးဖို့ တစ်ရှူးပေပါလေးတွေက သုံးထုပ်၊၊ အကြမ်းရေးဖို့ A4 Paper ထုပ်က နှစ်ထုပ်၊ ဆေးသေတ္တာက တစ်လုံး၊ ဂမုန်းပွင့်က ဂွမ်းစောင်ထူကြီးကတစ်ထည်၊ ခြေအိတ်၊ ဘောင်းဘီတိုရှည်၊ ရေချိုးရင်လဲဖို့ ပုဆိုးက နှစ်ထည်၊ ပွဲအခမ်းအနားရှိရင် မြန်မာဆိုပြီး ကိုယ်စားပြုဝတ်ဖို့ ယောပုဆိုးက တစ်ထည်၊ တိုက်ပုံက တစ်ထည်၊ ကြောင်လျှာသီးနှစ်စုံနဲ့ ဘီးဇီးနက်ဆုက နှစ်စုံ.... ညဖက် ဗိုက်ဆာရင်စားဖို့ မာမီးခေါက်ဆွဲနှစ်ထုပ်၊ မနက်ခင်း ကျောင်းမသွားခင် သောက်ဖို့ Nestle Instant Coffee Mix ထုပ်က နှစ်ထုပ်..
အဲဒါတွေတင်မကသေးဘူးဗျာ. ဘာလချောင်ကြော်... ဘာညာသာရကာအပြင် ဟိုရောက်ရင် အစားအသောက်တွေက ခြားနားသွားမှာမို့လို့ ကိုယ့်ဖာသာချက်စားရအောင် ထမင်းအိုးသေးသေးလေးပါ ထည့်ပေးလိုက်သေးရဲ့... မီးပူက တစ်ခုဗျာ. (ဒီရောက်တော့ မီးအားက 110 Volt နဲ့ဆိုတော့ သုံးမရပါဘူးဗျာ. ကြိုတင်မမေးခဲ့မိတာ ကျွန်တော့်အမှားပဲလေ..)
ကဲ. ဒီလောက်ဆို စဉ်းစားကြည့်ဗျာ. ကျွန်တော်တစ်ယောက် ဘယ်လောက်များ စမတ်ကျကျ ခရီးသွားနေလဲဆိုတာ... :)
တွန်းလှည်းလေးတစ်စီးကို ဆွဲပြီး ကိုယ့်ပစ္စည်းတွေကို မနိုင်မနင်းနဲ့ တင်ရတယ်. မဟုတ်ရင်တော့ အေးဆေးလိုက်သွားလို့ရတာပေါ့. ဒါပေသိ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ လေယာဉ်လက်မှတ်က အဆင်မပြေခဲ့ဘူး. တိုက်ရိုက်မရောက်ဘူး. ဆန်ဖရန်စစ္စကိုထိပဲ ၀ယ်လို့ရတယ်. ဒီဖက်က အေးဂျင့်က Domestic airline နဲ့ ဘွတ်ကင်လုပ်ပေးထားတယ်. ဒီတော့ ကိုယ့်ပစ္စည်းတွေကို ပြောင်းပြီး လေယာဉ်အသစ်အတွက် လက်မှတ်အသစ်ပြန်ချိန်း၊ ပစ္စည်းတွေ ချက်ကင်ပြန်ဝင်ရတယ်.
(ဆန်ဖရန်စစ္စကို လေယာဉ်ကွင်း - ၁)
(ဆန်ဖရန်စစ္စကို လေယာဉ်ကွင်း - ၂)
ချက်ကင်ဝင်ခါနီး ရဲထွားထွားကြီး သုံးယောက်က ကျွန်တော့် Luggage ကို စက်ထဲ ထည့်အဖြတ်... တီ..တီ..တီ..တီ... ဆိုပြီး ထမြည်ပါလေရော... 9/11 ဖြစ်ထားတာကလည်း မကြာသေးဆိုတော့ ရဲတွေက Totally Alert... လက်တွေက သေနတ်ထည့်ထားတဲ့ ခါးပတ်ပေါ်ရောက်သွားပြီး... Open your bag!!! တဲ့လေ...
ကျွန်တော်လည်း ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ ဖြစ်သွားပြီး... ယားဆတ်.. ရက်စ်ဆားဆိုပြီး ဖွင့်ပေးရတာပေါ့. အရေးထဲမှ အိတ်ဇစ်က ကြပ်နေသေးတယ်. ပြီးတော့ ဖွင့်လည်းပြလိုက်ရော ရဲတွေက ဓာတ်မီးတွေနဲ့ ထိုးပြီး ဟိုရှာဒီရှာ ရှာတာပေါ့.
လားလား. ပြီးတော့ ဘယ်ဟုတ်မလဲ. ကျွန်တော့်ရဲ့ ပေါင်းအိုးက အသံထမြည်တာကိုး. ပေါင်းအိုးဆိုလို့ ထမင်းပေါင်းအိုးလို ပေါင်းအိုးမဟုတ်ဘူးဗျ. ကျွန်တော့်ဟာက ခေါက်ဆွဲတွေဘာတွေပါ ထည့်ပြုတ်လို့ရတဲ့ ချိုင်းနားမိတ် ရေနွေးအိုးလိုမျိုးလေးလေ...
ရဲတွေလည်း ပြုံးသွားပြီး ဘာလုပ်ဖို့လဲလို့ ကျွန်တော့်ကိုမေးတယ်. I make noodle with that pot... ဘာညာလို့ ပြောလိုက်ရတာပေါ့. ပြီးတော့ သူတို့က မေးပါတယ်. ကျွန်တော်ကလည်း ကျောင်းလာတက်တာ ဘာညာပေါ့. ကျွန်တော့်ပစ္စည်းတွေကို သူတို့အထဲကို ထည့်လိုက်ပြီးတော့ လှမ်းအားပေးပါတယ်. Your English is so good, young man... ဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်း လေယာဉ်ကွင်းခေါင်မိုးကြီးနား ခေါင်းကပ်သွားလို့ ပြန်ဆွဲချလိုက်ရတယ်. အဲဒီ့မှာ မြောက်လာခဲ့သမျှ ကျောင်းကသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့မှ ပြုတ်ကျတော့တာပဲ. အခန်းဖော်ကတောင် ပြောတယ်.
What the hell you are talking about, man? Speak English... တဲ့... အဲလိုကို စကားပြောကောင်းတာလေ... ဟတ်ဟတ်.
ဆန်ဖရန်ကနေ တိုက်ရိုက်မရောက်သေးပါဘူး. Atlanta ဆိုတဲ့ မြို့ကို အရင်ပျံပါတယ်. ပြီးတော့မှ Indiana ကို ထပ်ပျံပါတယ်. ကျောင်းက လာကြိုပါတယ်. ခရီးရောက်မဆိုက်ပဲ ကျွန်တော့် Luggage တစ်လုံးပျောက်ပါတယ်. ဒါပေမယ့် ကျောင်းက officer က ဒါတွေကို နားလည်နေတော့ သူ့ရဲ့ Card လေး လေယာဉ်ရုံးမှာ ထားခဲ့ပြီး လိပ်စာအတိုင်း ပို့ပေးဖို့ မှာခဲ့တယ်.
(Terminal တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာ Air Train လို့ခေါ်တဲ့ ရထားနဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပေးတဲ့အထိ လေယာဉ်ကွင်းကြီးက အရမ်းကိုကြီးပါတယ်.)
အဲဒီ့နောက်ပိုင်းတော့ ကျောင်းရောက်တယ်. စာသင်တယ်. ကျောင်းသွားတယ်. အိမ်က ခြစ်ကုပ်သယ်လာခဲ့တဲ့ ပိုက်ဆံထုပ်လေးကို ကျောင်းမှာ သွားသွင်းရတယ်. ပြန်လာတော့ လက်ထဲမှာ ဗလာနတ္ထိ... အားငယ်လိုက်တာ. ခုနေများ တစ်ခုခု မပြောကောင်းမဆိုကောင်း ဖြစ်သွားရင် ငါ့ကို ဘယ်သူကများ လာကူညီမလဲဆိုပြီး ရှာကြည့်တော့လည်း ဘယ်သူမှ မရှိ... တော်တော်ကို စိတ်အားငယ်ဖို့ ကောင်းခဲ့တဲ့ အချိန်တွေပါ.
ဘဏ်သွားပြီး အကောင့်ဖွင့်တော့လည်း Myanmar ဆိုတာက Black List ဖြစ်နေလို့ ဖွင့်မရခဲ့ပြန်ဘူး. ဖုန်းကဒ်ဝယ်ဖို့တောင် အဆင်မပြေခဲ့ဘူး. ကျောင်းသားအချင်းချင်း အကူအညီတောင်းဖို့ ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီ့အချိန်မှာ ကျွန်တော့်ရှေ့ရောက်နှင့်နေတဲ့ အတန်းကြီးသမား မြန်မာက နယူးယောက်ကို အလည်သွားနေတာ ပြန်မရောက်သေးဘူး. ရောက်နေတာကလည်း နှစ်ရက်ရှိပြီ. အိမ်က စိတ်ပူနေမယ်ဆိုတာ သိတယ်. အင်တာနက်ဆိုတာလည်း အဲဒီ့တုန်းက ရန်ကုန်မှာ အဲလောက် ဆိုင်တွေမများသေးသလို အိမ်ကလူတွေကလည်း မသုံးတတ်ကြသေးဘူး. နောက်ဆုံးတော့ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုပြီး အခန်းထဲက လိုင်းဖုန်းနဲ့ ရန်ကုန်ကို တိုက်ရိုက်ခေါ်ချလိုက်ပါတယ်. မိနစ် ၂၀ လောက်လားပြောဖြစ်လိုက်တယ်. ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ. အားလုံးက စိတ်ပူနေကြတယ်. အဆင်ပြေတဲ့အကြောင်း. စိတ်မပူဖို့အကြောင်း ပြောနေချိန်မှာ ကျွန်တော့်အကြည့်တွေက ခေါင်းအုံးပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ဟောင်းလောင်းလေးကို ငေးကြည့်နေမိတယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်တစ်ယောက်ပဲ သိခဲ့ပါတယ်ဗျာ... လကုန်တော့ ဖုန်းဘီလ်ဝင်လာတယ်. ဒေါ်လာ ၄၀ တဲ့... အိ... အိ... အိ...
ကဲကဲ... အကုန်လုံးပြောလိုက်ရင်လည်း ကျွန်တော့်ကို သနားပြီး ငွေတွေလာလွှဲနေကြဦးမယ်. ဟတ်ဟတ်. ကျွန်တော်ရုန်းကန်လှုပ်ရှားခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းတွေကို ပညာတော်သင်မှတ်တမ်းဆိုပြီး တစ်နေ့ စာအုပ်ထုတ်ရေးဖို့ ရှိပါသေးတယ်. ဒါကြောင့် အကုန်မပြောတော့ဘူးဗျာ. နော်. ကျောင်းလာတက်ရတာ မပြည့်စုံကြသူတွေ များပါတယ်. စကောလားရှစ် အပြည့်ရသူတွေအတွက် ပြဿနာမဟုတ်ပေမယ့် အပြည့်မရသူတွေ၊ ဒါ့အပြင် နောက်ကလိုက်မယ့် Background မရှိသူတွေအတွက်တော့ တကယ့်ကို Stressful Experience ပါပဲ...
ကျောင်းဖွင့်ချိန်မှာ ကျောင်းပြေးတက်လိုက်၊ ကျောင်းမှာ ရသမျှ အလုပ်လေးတွေ ကုန်းရုန်းလုပ်လိုက်၊ ကျောင်းပိတ်ချိန်မှာ နယူးယောက်မြို့ကြီးကို စွန့်စားတက်လာပြီး အလုပ်လုပ်လိုက်နဲ့ ကျွန်တော်တစ်ယောက် ကြုံသလို ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်. ရန်ကုန်မှာ စာသင်ပြီး နုရွလှပခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်လက်ဖောင်းဖောင်းလေးတွေ ဒီမှာ ဓားတွေကိုင်တတ်လာတယ်. ဆူရှီးတွေ လိပ်တတ်လာခဲ့တယ်. ၄၅၀ ဒီဂရီတင်ထားတဲ့ မီးဖိုပူပူကြီးနားမှာ Teriraki Chicken တွေ ကြော်တတ်လာခဲ့တယ်. ဦးထုပ်နီလေးဆောင်းပြီး ဖြတ်သွားဖြတ်လာ ဈေးဝယ်တွေကို ကိုယ့်ဆိုင်မှာလာစားဖို့ ဈေးဝယ်ခေါ်တတ်လာခဲ့တယ်. သူများအ၀တ်တွေကိုလည်း လျှော်ပေးတတ်လာတယ်. အ၀တ်တွေလည်းခေါက်ပေးတတ်လာတယ်. Dry Clean လုပ်တာတွေလည်း နားလည်လာတယ်. အင်္ကျီတွေ၊ ဘောင်းဘီတွေကို ဘယ်လိုပြင်ရတယ်ဆိုတာတွေလည်း သင်ယူနားလည်တတ်လာခဲ့တယ်... စိန်တွေကျောက်တွေအကြောင်းလည်း တီးမိခေါက်မိရှိလာတယ်.
ကျောင်းပြန်ရောက်ရင် ကွန်ပြူတာ ခလုတ်လေးတွေပေါ်မှာ ပြေးလွှားလှုပ်ရှားနေတဲ့ ဒီလက်ချောင်းလေးတွေ ကျောင်းပိတ်ချိန်မှာ ကြက်သားနယ်မလားနယ်ရဲ့၊ မီးဖိုချောင်ထဲမှာ အသားတွေလှီးနေမလားလှီးရဲ့၊ နှင်းတွေ ထူလပိန်းကျနေတဲ့ နှင်းတောထဲမှာ Customer တွေရဲ့ Laundry ထုပ်တွေ သယ်ပိုးပြီး အိမ်ပေါက်စေ့လိုက်ပိုးလားပို့ရဲ့နဲ့ ဘ၀နှစ်ခုကို ဖြတ်သန်းနေခဲ့တယ်.
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ပျော်ပါတယ်. ကျွန်တော်ရရှိခဲ့တဲ့ အောင်မြင်မှုတွေအတွက် ကျွန်တော် အချိန်မရွေး မြိန်ရည်ယှက်ရည် ပြောဆိုနိုင်တယ်. လိပ်ပြာသန့်စွာ ဂုဏ်ယူတယ်. ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပဲ ကဲ့ရဲ့စကားတင်းဆိုဆို ကျွန်တော် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ ကျွန်တော်ချမှတ်ထားတဲ့ ပန်းတိုင်ကို မဆုတ်မနစ် လျှောက်လှမ်းနေဆဲပဲ. ပင်ပန်းလာရင် အိပ်ပစ်လိုက်မယ်. အနားယူပစ်လိုက်မယ်. တစ်နေ့တစ်ခြားနီးစပ်လာနေတဲ့ ကိုယ့်ပန်းတိုင်အတွက် ရင်ခုန်ခြင်းတွေနဲ့အတူ ချွေးစက်တွေကို မေ့လျော့ပစ်လိုက်မယ်.
ကျွန်တော် မပြန်နိုင်သေးပါဘူး. ကျွန်တော်ကျောင်းလည်း မပြီးသေးပါဘူး. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်မိသားစုမှာ တင်နေတဲ့ အကြွေးတွေကိုလည်း အကြေချေနိုင်ခဲ့ပြီ. ကျွန်တော့်မိသားစု မချမ်းသာနိုင်သေးပေမယ့် ငွေကြေးတစ်ခုအတွက် ပူပင်ရတဲ့ သောကမျိုးတော့ မရှိနိုင်တော့လောက်အောင် ကျွန်တော်ဒီမှာ လှိမ့်ပိန့်နေထိုင်ရင်း ကြိုးစားရုန်းကန်ခဲ့တယ်. ဒီ့အတွက် အပြန်အလှန်အနေနဲ့ ကျွန်တော် မြန်မာပြည်ကို မပြန်သေးခြင်းဆိုတာနဲ့ ရင်းနှီးစတေးခဲ့တယ်.
ကျွန်တော်အထီးကျန်ခံစားခဲ့ရတဲ့နေ့တွေမှာ ကျွန်တော့်အတွက် ဂစ်တာတစ်လုံးရှိတယ်. စာအုပ်ပုံတစ်ခုရှိတယ်. သီချင်းတွေရှိတယ်. ဘလော့ဂ်တစ်ခုရှိတယ်. ဘလော့ဂါမိတ်ဆွေတွေရှိတယ်. ကင်မရာတစ်လုံးရှိတယ်. ပုံဆွဲစက္ကူတစ်ချို့ရှိတယ်.
ဘ၀ဆိုတာ ပြီးပြည့်စုံတယ်ရယ်လို့တော့ မရှိဘူးပေါ့ဗျာ. တစ်ခုလိုချင် တစ်ခုတော့ စတေးရမြဲပေါ့. နှစ်ခုလုံး တစ်ပြိုင်တည်းရချင်လို့တော့ မရဘူးပေါ့လေ. ကျွန်တော်တစ်ခုလိုချင်တဲ့အတွက် တစ်ခုကို စတေးခဲ့တယ်. တစ်ချိန်မှာတော့ ကျွန်တော် လိုချင်တဲ့ နှစ်ခုလုံး ပြီးပြည့်စုံမယ့်တစ်နေ့ ရောက်စေရမယ်လို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားရင်း ကျွန်တော်ယုံကြည်စွာ ချမှတ်ခဲ့တဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ကျွန်တော်ဆက်လျှောက်လှမ်းနေဆဲပါပဲ.....
ကဲ... မ၀ါရေ... ကျေနပ်တော့ဗျာ. နော်. ဒါတောင်လျှော့ရေးထားတာ. လွှတ်ရေးလိုက်ရင် ဘလော့ဂ်ကြီးပွင့်ထွက်သွားမှာစိုးလို့... ဟတ်ဟတ်.
Note: ပုံတွေကို ဂူဂဲလ်က ရှာယူပါတယ်.
Posted By Yan 17 Comments
Deepening into the darkness
Though revealing n'ver thy face under the light
Withafool's ignorance, pretending to be wise...
Inching to the edges
Though knowing not what the future hold
With courageous sense, it says, 'Go! Go! Go!'..
Walking down with full confidence
Though shaken by waves of lies
With all strength, pacing till he dies...
Demanding loud for peace
Though threatened by anger and power
With responsibility untold, standing up for the lower...
Blossoming with all faith and respect
Though disregarded due to fear
With all forgiveness, hovering into full gear...
Comprising of multicolors
Though different by person and path
All courses lead to the peaceful land...
Hone thy skills and thy maturity
With unity, we shall bring the liberty...
Build thyself and thy confidence
Ho! March to the silver lining end....
စိတ်ကုးပေါက်ရာလေးတွေကို ရေးခြစ်ကြည့်ရုံသက်သက်ပါ.... သိပ်တော့ smooth မဖြစ်သလို ခံစားရတယ်.
ခုတလော စာရေးလို့ မရဘူးဖြစ်နေပြန်တယ်ဗျာ...
လူက ကောင်းကောင်းနေမကောင်းသေးတာကြောင့်လည်း ပါမလားမသိဘူးဗျ. စာရေးမယ်လို့ ထိုင်လိုက်ပြီး အသက်ကို ခပ်ပြင်းပြင်းတစ်ချက်ရှု၊ မုဒ်သွင်းလိုက်တာနဲ့ မုဒ်လည်းဝင် နှာခေါင်းထဲလည်း ဘာတွေဝင်လို့ ၀င်မှန်းမသိဖြစ်ပြီး ဟတ်ချိုးတော့တာပဲ...
ဒီနှစ် ဖြစ်တဲ့ အလာဂျီ(allergy) တော်တော်ခံရတယ်ဗျာ. ဒီကြားထဲ Swine Flu ကလည်း Around the corner ဆိုတော့ ကိုယ့်ဆီမှာ ဖြစ်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ သတင်းစာထဲ၊ တီဗွီတွေထဲမှာ ကြော်ငြာနေတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့များ မတော်တဆ တူနေမလားဆိုပြီး တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်ရတာလည်း အခါခါ...
ဟိုတလောက ဆေးသောက်မှားလို့ ၀မ်းကလျှောလိုက်သေးရဲ့.... အားကိုးတကြီးနဲ့ မ ကိုများ တိုင်ပင်လိုက်မယ် မကြံနဲ့.... ဘာပြောတယ်မှတ်လဲ... အဲဒါ အေနဲ့စပြီး အက်စ်နဲ့ ဆုံးတဲ့ ရောဂါများ ဖြစ်နေလားမသိ တဲ့လေ... ကျွန်တော်လည်း စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ ပြန်ပြောလိုက်တယ်. အဲဒီ့ရောဂါလား သိပ်သိတာပေါ့လို့...
'Achit Nat Soe' လို့လေ....း)
စထရပ်စ် (Stress) တွေလည်း များနေတယ်ဗျာ. အလုပ်ကိစ္စ၊ အိမ်ကိစ္စ၊ ကျောင်းကိစ္စ၊ မိသားစုကိစ္စ၊ စီးပွားရေးကိစ္စ၊ ကြီးပွားရေးကိစ္စ၊ မီးဖွားရေးကိစ္စ (အဲလေ.. ယောင်ကုန်ပြီ. ဟတ်ဟတ်)
အင်း... ဘာလိုလိုနဲ့ အဆက်ဟောင်းကြီးလည်း ကလေးမွေးတော့မယ်ကြားတယ်ဗျ... (ငိုချင်တယ်) ဟိုတလောကတောင် ဂျီတော့ခ်မှာ တက်လာတာ တွေ့လို့ လှမ်းနောက်လိုက်သေးတယ်.
'သားလေးမွေးရင် ကိုယ့်နာမည်ပေးပါ' လို့လေ...
အံမယ်... ရှက်သွေးဖြန်းသွားမယ်များထင်နေလား.. နားနားနားနား..
သူကလည်း မခေဘူးဗျ... ပေးမှာပေါ့တဲ့... ဘယ်လိုပေးမှာလဲ ပြန်မေးလိုက်တော့ ဘာပြောတယ်မှတ်လဲ... 'ဘူရေးရဲရန်ရန်' လို့ပေးမှာတဲ့ဗျာ... (အောင်မျငေး.. ဂျောက်ဂျက်ရယ်... လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီဟလို့ စိတ်ထဲကသာ ကျိန်ဆဲနေမိတော့တယ်.) ဟတ်ဟတ်ဟတ်...
တော်သေးတာပေါ့. ဘူရေးရဲရန်ရန်ဆိုလို့... တော်နေကြာ စိတ်ပြောင်းပြီး ဘူတားရန်အောင်. ဘူဆွတ်ရန်အောင်. ဘူဘူကြီးရန်အောင်လို့ မပေးတာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်ရမလို ဖြစ်နေပြီ.. အဲ... လုပ်ကြပါဦး... ပြောရင်းနဲ့ကို ၀မ်းက ထပ်လျှောချင်လာပြီ...း)
ကျွန်တော်လည်း စထရပ်စ်တွေ သိပ်များနေတယ်ဗျာ. နှစ်ပတ်ရှိပြီ. အလုပ်ဆင်းရင် မြစ်ကမ်းဘေးမှာ သွားသွားထိုင်ရင်း အတ္တတွေကို ရေထဲပစ်ပေါက်နေတာ... ဟိုတစ်နေ့ကတော့ အပေါက်ကောင်းကောင်းနဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ပါ ပစ်ပေါက်မိတော့မလို့ဆဲဆဲ ဘင်ဂျမင်ဖရန်ကလင်က "What's up, man?" ဆိုတာနဲ့ ဘုရားဘုရားဘုရားဆိုပြီး အသာပြန်ခေါက်သိမ်းထားလိုက်ရတယ်...
စိတ်နဲ့လူနဲ့လည်း သိပ်မကပ်ချင်ဘူး.. အရင်တုန်းကလို ရယ်ရယ်မောမော ပေါ့ပေါ့ပါးပါး စိတ်ထားလေး ပြန်ရချင်တယ်.
အင်း... လွှဲချတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး. ဒီကိစ္စက မ နဲ့ အများကြီး သက်ဆိုင်တယ်.း(((((
တော်ပါပြီဗျာ. မပြောတော့ပါဘူး... မန္တလေးမှာနေခဲ့တုန်းက လမ်းထိပ်မှာနေတဲ့ တရုတ်ကြီးပြောသလိုပဲ ပြောရတော့မယ်.
ဖိသမျှအီကြောင်း အီကောင်းပဲပေါ့လို့ ၀တွေးလယ်... ငှဲ... ငှဲ... ငှဲ...
စပ်မိလို့ ပြောရဦးမယ်... ကျွန်တော်က အရင်ဘ၀က ရေကသိုဏ်းများ ရှုခဲ့ဖူးလားမသိဘူး. ဒီဘ၀မှာ ရေစပ်နားသွားထိုင်တာကို တော်တော်ကြိုက်တယ်. ရေကို ကြည့်နေရရင်ကို စိတ်က တည်ငြိမ်လာတယ်. အေးချမ်းလာတယ်. လမ်းထိပ်ကဆိုင်မှာ ရေဖြူဖြူလေးကို ရေခဲတုံးလေး ပလုံခနဲ ပစ်ထည့်ပြီး ခွက်လေးကို လှည့်ကာလှည့်ကာ ကြည့်ရင်တော့ ဘာပြောကောင်းမလဲ... အဟဲ.ဟဲ.
မန္တလေးမှာတုန်းကလည်း ကျွန်တော် စိတ်တွေ နောက်ကျိရှုပ်ထွေးလာရင် စက်ဘီးကိုဆွဲ၊ ကျုံးဘေးမှာ အအေးသွားသောက်ပြီး တင်းနေတဲ့စိတ်တွေကို လျှော့ချပစ်လိုက်တတ်တဲ့ အကျင့်ရှိတယ်. ဒီမှာကတော့ သူ့အရပ်နဲ့ သူ့ဇာတ်ပေါ့ဗျာ. မြစ်ကမ်းဘေးနားလေးက ခုံတန်းလျားလေးမှာ ထိုင်ရင်း အတွေးစဉ်လေးတွေ ဆင့်ကာဆင့်ကာနဲ့ စိတ်ကူးလေးယဉ်နေလိုက်ရရင် ကျွန်တော့်ရဲ့ စထရပ်စ်အချို့ လျော့ကျသွားတတ်တယ်.
နောက်ပို့စ်တစ်ခုကျမှ ကျွန်တော် မြစ်ကမ်းဘေးမှာ ထိုင်ရင်း ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဆည်းဆာဓာတ်ပုံ ကောင်းကောင်းလေးတွေ တင်ပေးဦးမယ်.
အခု ဒီပို့စ်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကျွန်တော် စာရေးလို့ မရသေးဘူးဆိုတာကို ရှင်းပြမလို့ပါပဲ... အဲလို ရှင်းပြရင်းနဲ့ကိုပဲ ကျွန်တော်တစ်ယောက် တော်တော်လေကြောရှည်နေမိပြီ ဆိုတာကို သတိထားမိချိန်မှာတော့ ဘလော့ဂါရပ်ကွက်ထဲက တစ်ယောက်က မကြားတကြား လှမ်းပြောပါတယ်...
"အဲဒီ့က ဘူလေးလဲတဲ့... "
နောက်နေ့မှ တွေ့မယ်ဗျာ... အိပ်တော့မယ်.
တမ်းတခြင်းများစွာဖြင့် (သို့) မ-၇
ခြောက်သွေ့နေတဲ့ သစ်တစ်ပင်အောက် ဒီနေ့ ပြန်ရောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်.
သူလှုပ်ရှားသမျှ ရင်ခုန်စွာနဲ့ လိုက်ကြည့်လို့မ၀
ပြောရမယ့် စကားလုံးတွေ ပျောက်ဆုံးနေတာ
ရင်ထဲမှာ ဗလာဖြစ်နေလို့တော့ မဟုတ်ခဲ့ဘူး
ရင်ထဲမှာ ဆို့နင့် မွန်းကြပ်လွန်းလို့ပါ
ပြန်ဆုံရင် ဘယ်လိုပြောမယ်လို့ အားခဲထားသမျှ
ပြန်တွေ့ရင် ဘယ်လိုလွမ်းနေရတယ်လို့ ပြောချင်ခဲ့သမျှ
သူ့ရဲ့ မျက်လွှာတစ်ချက် ဝေ့အကြည့်မှာ ရေခဲမြစ်ထဲ ပျော်ဝင်စီးဆင်းသွားကြတယ်.
ကိုယ် သိပ်များ ရူးသွပ်လွန်းနေပြီလား..
သူ့ဘေးနားမှာ ကိုယ်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ အသိလေးနဲ့ပဲ
ရန်လိုနေတဲ့ လောကကြီးကို ခေတ္တ အဆက်အသွယ် ဖြတ်ထားချင်တယ်.
သူ့ဆံနွယ်ထက်က ဟဲရ်ကုတ်နံ့လေးကို လွမ်းတယ်
ပိရိသေသပ်လှပတဲ့ သူ့နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို တမ်းတမိတယ်.
နူးညံ့အိစက်လှတဲ့ သူ့ပါးပြင်လေးတွေကို အိပ်မက်ထဲမှာ လှမ်းစမ်းမိတယ်.
သူ့ကိုယ်ငွေ့နွေးနွေးလေး ကိုယ့်ရင်ခွင်ထဲ ဖြတ်စီးဆင်းသွားတယ်.
တွယ်တာမိတဲ့ သံယောဇဉ်ကိုတော့ အကြွင်းမဲ့ယုံနေဆဲပဲ...
ခြောက်သွေ့နေခဲ့ဖူးတဲ့ သစ်တစ်ပင်အောက် ဒီနေ့ ပြန်ရောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်.
မျက်ဝန်းညိုလေးတွေကို မြတ်နိုးစွာ ငေးကြည့်ရင်း
ကြိုတင်မစီစဉ်ထားတဲ့ စကားလုံးတွေ ကဆုန်ပေါက် ပြေးဆင်းကုန်ကြတယ်.
ညက ကျွန်တော် မ ကို အိပ်မက်မက်သေးတယ်
အဲဒါ သိပ်တော့ မကောင်းဘူးထင်တယ်နော်.
အိပ်မက်ထဲမှာ လှတယ်လို့ မက်ရင် အပြင်မှာ နေမကောင်းဖြစ်တတ်တယ်တဲ့
အပြင်သွားရင် သတိထားပါနော် မ
အရမ်းလွမ်းတယ် မ ရာ...'
ဒီသစ်ခြောက်ပင်အောက် နောက်နေ့တွေ ရောက်ဖြစ်ဦးမှာပါလေ...
နားကြပ်လေးကို နားမှာတပ်ထားရင်း၊ အိပ်ယာပေါ်မှာ စောင်ပါးပါးလေးကို ခြုံလို့ ပြန်ဖတ်ဖြစ်တဲ့ ကဗျာဟောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ. ဒီစာရိုက်တာတောင် လက်တွေ နည်းနည်းတုန်ချင်နေတယ်. အခြေအနေသိပ်မကောင်းတော့ဘူးထင်တယ်ဗျာ... :)
မြင်ရသောသူ၊ ဩော်... သူမဟုတ်
စကားများစွာ ပြောချင်သည်....။ ။
ရတနာ (၃)၊ သောကခြေရာ ရတနာ ကဗျာများ၊ မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း)